U.S. Media Tour မှာ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ Miss Universe အလှမယ် Catriona Gray – FemaleWear.net
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၆၈)ကြိမ်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုမယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Catriona Gray က winner ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Miss Universe ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပစဉ်မှာ သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Evening Dress တွေဟာ စနစ်တကျ လက်ရာသေသပ်လွန်းတာကြောင့် အားလုံးက အံ့သြချီးကျူးခဲ့ရပြီး Miss Universe ပြိုင်ပွဲကနေ ယနေ့အချိန်ထိ သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံတွေကို အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြလို့ မီဒီယာတွေမှာ မကြာခဏ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ ရပါတယ်။
4 Days since she was crowned Miss Universe ✨-—— Catriona Gray from the Philippines ?? . . . #catrionagray #missuniverse #missphilippines #missuniverse2018
A post shared by Catriona Gray (@catrionauniverse) on Dec 20, 2018 at 7:40pm PST
Kelly and Ryan တို့စီစဉ်တဲ့ Good Morning America and Live အစီအစဉ်မှာတော့ သူမဟာ အဝါရောင်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဝါရောင်ဝတ်စုံဟာဆိုရင် သူမနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ကျော့ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီးပေါ်လွင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ်ကြပ် dress လေးဖြစ်ပြီး အောက်ခြေမှာ အတွန့်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားကာ dress ရဲ့ အရှည်က ဒူးအထက်လောက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဝါရောင်ဝတ်စုံပေါ်မှာ အနက်ရောင်ခါးပတ်လေး တပ်ဆင်ထားတာလေးက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြီး ရှိးရှင်းတဲ့ အဝါရောင်ဝတ်စုံလေးကို ပိုလှပသွားစေပါတယ်။
@missuniverse Catriona Gray with #KellyandRyan! #??
ဒီအစီအစဉ်မှာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့သလို သူမဟာ နယူးယောက်ကို ပြောင်းရွေ့နေထိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ Catriona Gray ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အဝါရောင်ဝတ်စုံဟာဆိုရင် အင်္ဂလန်ဒီဇိုင်နာ Karen Millen ရဲ့ ဝတ်စုံဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးအနေနဲ့ ဒေါ်လာ (၁၈၀) ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်..။
WATCH: Catriona’s full Live interview on Kelly and Ryan! This Interview felt so natural, always does when you’ve got @catriona_gray talking! ?❤️? . . . #catrionagray #missuniverse #missuniverso #missuniverse2018 #missphilippines
အင်္ဂလန် အမျိုးသမီးဒီဇိုင်နာ Karen Millen ဟာဆိုရင် ၁၉၈၂ ခုနစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနစ်မှာ ဖက်ရှင်လောကထဲ စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးဖက်ရှင်တွေကို အဓိကထား ထုတ်လုပ်ပြီး Dress တွေအပြင် accessories၊ အိတ်၊ ဖိနပ် တို့ကိုပါ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပါသေးတယ်။ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေး၊ ရုရှား၊ အိုင်ယာလန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေအတွက် https://www.karenmillen.com မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Tags: Catriona Gray, Celebrity, Karen Millen, Yellow Dress